Ivanovic: Kulanka Juventus final ayuu u yahay Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar Ivanovic: Kulanka Juventus final ayuu u yahay Chelsea.
Ivanovic: Kulanka Juventus final ayuu u yahay Chelsea.
Daafaca kooxda Chelsea Branislav Ivanovic ayaa rumeysan in kulankooda caawa ay ka hor imaanayaan Chelsea uu u yahay sida ciyaar Final oo kale, iyagoo isha ku haaya inay u gudbaan wareega xiga.
Guul ay ka gaaraan kooxda heysata horyaalka Serie A ayaa ka dhigeysa Blues inay xaqiiqsato u gudbitaankooda wareega Knockout-ka, iyadoo koobkaan ku guuleysatay sanadii hore, halka ay dhibic u noqon doonto fa’iido kale.
Si kastaba, hadii guul darro soo gaarto markaas shaki ayaa geli doona booskooda wareega 16ka, iyagoona Qatar u geli doona inay ka daba maraan Juventus iyo Shakhtar Donetsk, Ivanovic ayaana qaba in kulankaan uu yahay mid muhiimadiisa leh.
Isagoo la hadlaayey Website-ka rasmiga ah ee Chelsea ka hor kulankaan ayuu yiri: “Kulanka Talaadada [Caawa] waa kulankeenii xilli ciyaareedka. Waxaan horay usoo ciyaarnay kulamo sidaan oo kale ah, sanadkaan, laakiin kani waa mid Final oo kale inoo ah. Waxay noo go’aamin kartaa wax badan, laakiin hadii aan u ciyaarno sidaas waan ognahay inaan fiicnaaneyno.
“Waan ognahay kulankaan ma khasaarin karno, dabcan.laakiin ma ahan caqliga ciyaartoyda. Waan inaan raacnaa Falsafadeena weerarka aana isku daynaa inaan guul gaarno kulankaan, sababtoo ah waxaan nahay Chelsea waana naqaanaa sida loo ciyaaro.
“Waxaan dooneynaa inaan guuleysano kulan walba aana isreebreebka u talaabno sida ugu macquulsan, waana inaan ka dhabeynaa falsafadeena.”